Prof: Aar iyo Senator Obama oo Isku Jaamacad ka Soo Baxay ma ku Guulaysandoonaa Doorashooyinka soo Socda | Somaliland.Org
February 27, 2008	Tani markii ay bilowdeen tartanka doorashooyinka madaxtinimada( presidential election)wadanka maraykanka ayaa tvyada caalamka si wayn u hadal hayaan cida ku guulaysan doonta labada senator barack obama iyo hillary Clinton oo labadu ka wada tirsan xisbiga Democratic. Habada guula isdaba jooga ah ee uu gaadhay obama marqudha ayaa dadka faaleeyaa siyaasada maraykanku ku sheegeen inuu obama helay fursado badan oo ay dadku aad uga soo horjeedaa maamulka hada jira taasi oo sii dheeri galisay inuu obama ilaa heerkaasi gaadho, isagoo dadka ugu baaqayo isbedel ka dhaca dalka maraykanka .
Hadaba obama ma noqon karaa mid mideeya bulshawayna maraykanka ee dhaqanka iyo diimaha ku kala duwan aaminsan.
Senator obama oo ah nin aad u firfircoon karti iyo aqoona u leh howlaha horyaala ayaan eegi doonaa haddii uu ku soo baxo tartanka bal sida uu u marayndoono. Hadaba hadii aynu taariikhda obama dib u jaleecno aabihii hussein oo asalkiisu ahaa nin keyniyati ah oo ka soo haajiray qaarada afrika iyo hooyadiina oo ah qof cadaana oo u dhalatay wadanka maraykan.
Senator obama wuxuu dhashay august 4, 1961. gobolka illinois wuxuuna yaraantiisii ku soo barbaaray magaalooyinka honolulu iyo hawaii obama isagoo lix jir ah ayuu isaga iyo hooyadii waxay wakhti gaaban ku noolaayeen wadanka indonesia.
Wax yar ka dib obama wuxuu ku soo laabtay wadanka maraykanka halkaasi oo uu waxbarashadiisii ka sii ka bilaabay, obama wuxuu ka soo qalin jabiyay jaamacada Columbia University iyo Harvard Law School.
Senator obama wuxuu bilaabay inuu bulshadiisa u shaqeeyo isagoo ahaa markaasi community organizer, wuxuuna wakhiyada qaar casharo ka bixin jiray jaamacada University of Chicago Lecturer. sidoo kale waxa uu wax badan ku soo shaqeeyay isagoo ahaa looyar Civil rigts lawyer u dooda dadka dhibaataysa ama la soo darsaan cunsuriyada wakhtigaasi ka jiray gudaha dalka maraykanka. hadaba intii aanu u tartamin xafiiska dowlada ayuu ku guuldaraystay inuu ka mid noqodo U.S. House Of Representatives wakhtigaasi oo ahayd 2000.
2004 ayuu dib u bilaabay campaign oo ugu tartamayay U.S senate. waxaana ku guulaysatay inuu ka mid noqdo U.S senate laga soo doorto gobolka Illinois isagoo helay cod dhan 70% .
Dhinaca kale waxaa dhawaa la filayaa in somaliland ka bilowdaan ololihii doorashooyinka bilaha fooda inagoo haya, sida aan filayo inay soo horayn doonaan doorashooyinka deegaanku iyo tan Madaxwaynah. wararka na soo gaadhay ayaa sheegaya in durba ay gudidii doorashooyinka shalay u ruqaansadeen dhankaasi iyo gobolka Awdal iyadoo dhawaan la bilaabi doono diwaangalinta.si loo ogaado tirada dadka codaynaysa iyo in la aqoonsado qofka codaynaya oo la sameeyo kaadhadh aqoonsi.
Hadaba xisbiyada tartanku ka dhexeeyo oo ah saddex xisbi oo kala ah
Kulmiye ,Ucid iyo Udub, Hadaba dareenka dadwaynu ay is waydiinaa ayaa waxay tahay maanta ma ku ceshan doonaa Udub kolay waxaan ka war haynaa doorashadii hore iyo qaabkii ay u dhacay oo ay dadku ka doorteen nabada intii uu dalka qalaasi iyo xasilooni daro ka dhici lahayd. markii la arkay qalooca iyo madax adayga ina riyaale ilayn hadii aan la kala roonaan roob ma da,o , guusha iyo gobonimada waxaa loogu deeqay inay kulmiye afkiisa iska haystaan ducana loogu diro.
Labada xisbi ee ay kubada tartanku dhextaalo ayaa ah Kulmiye iyo Udub. saadaasha dadwaynaha iyo dadka siyaasada indha indhaaya ayaa waxay sheegayaan in udub kubada ku laagayo gool aan biro lahayn. waxaana sii kordhaysa mar marka ka dambeeya taageerayaasha Udub oo u sii qulqulada dhanka xisbiga kulmiye.
Shalay ayay ahayd markii ay beesha reer nuur ka biyo diideen saamigii gudida doorashada ee gobolka Awdal. waxaana si wayn uga cadooday suldaanadii , culimadii , waxgaradkii ,aqoonyahanadii , iyo dhalinyartii oo fadhiga ka kacay arintana u arkay mid
wax wayn u dhimaysa beesha.
Pro. Aar oo ah aqoon yahan caan ah guud ahaan Somaliya kana mid ahaa ragii dhidibada u taagay nadab iyo horumarka somaliland ayay dadka qaar ku tilmaameen inuu yahay ninka kaliye ee ku haboon jagadaasi. marka loo eegi ninka tartanka kula jira oo ay dadku leeyihiin waa macalinkii iyo ardaygiisii . prof intii aanu u tartamin mansabka jagadan ayaa wuxuu shaqayn jiray ha,aydaha deeqaha bixiya intii uu ka shaqaynayay waxa uu si wayn uga qayb qaatay dhib u dhiska gobolka waxayna reer awdal ku xasuustaa markii uu madax ka ahaa ha,aydii SOSVO ee biyaha galisay magaalada borame, sidoo qayb wayn ka qaatay dhinaca waxbarashada oo uu ka mid ahaa qoraayaashii dejiyay manhajka waxbarashada somaliland. waxbarashda gobolka awdalna gaadhsiiyay heersare isagoo tuulo kaste ka dhisay dugsiyo kana mid ahaa dadkii ka qab qaatay dhimaha jaamcada Camuud.
Hadaba Prof Aar oo ay isku jaamacad ka soo baxeen senate obama ma kuulaysan doonaan doorashooyinka soo socda. Prof. Aar oo ka soo qalin jabiyay jaamacada columbia universtiy oo ka soo qaatay shahaadooniyka M. ED iyo M.A ayaa haddii uu ku guulaysato jagadan madaxwayna ku xigeenka uu somaliland u soo hoyn doona guulo la taaban karo.
hadaba si loo gaadho guulahaasi ayaa dadwaynaha reer somaliland waxaan ka codsanayaa in ay ilaaliyaan deganaasha iyo nabada loona diyaar garoobo doorashooyinka soo socda .
f.g. Cv ga Prof. Aar waxaan diin soo gudbin doonaa markay ay gaadho wakhtigeeda.